Dowladda oo dhan: Dib -u -nooleynta iyo Dib -u -habaynta Duulimaadyada Hindiya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Dowladda oo dhan: Dib -u -nooleynta iyo Dib -u -habaynta Duulimaadyada Hindiya
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Qeybta duulimaadyada Hindiya, oo ay ku jiraan shirkadaha duulimaadyada, garoomada diyaaradaha, iyo adeegyada la xiriira, waxay la kulmeen culeys maaliyadeed oo ku saabsan masiibada COVID-19.
Dowladda Hindiya ayaa miisaantay tallaabooyin dib loogu soo nooleynayo waaxda duulista rayidka ee Hindiya.
Ku dhawaad ​​Rs. 25,000 crores ayaa lagu bixinayaa kobcinta iyo horumarinta waaxda duulista rayidka 4 ilaa 5 sano ee soo socota.
Hawlgallada gudaha ayaa hadda gaaray qiyaastii 50% heerarkii ka horreeyay COVID, tirada rarkana waxay kordhay 7 ilaa 28.
Wasiiru -dawlaha Wasaaradda Duulista Hawada ee Hindiya, General (Retd.) Dr. VK Singh, ayaa jawaab qoraal ah ku sheegay Shri MV Shreyams Kumar oo ku sugan Rajya Sabha maanta in natiijooyinka ugu muhiimsan ay noqdeen in kasta oo uu jiro masiibada.
Faahfaahinta tallaabooyin waaweyn oo ay dawladdu qaaday si loo soo nooleeyo waaxda duulista rayidka inta lagu jiro muddadan, waxaa ka mid ah waxyaabo kale, sida soo socota:
Sii taageero shirkadaha diyaaradaha iyada oo loo marayo tallaabooyin siyaasadeed oo kala duwan.
Bixinta kaabayaasha madaarka iyada oo loo marayo Maamulka Madaarada Hindiya iyo hawlwadeennada gaarka loo leeyahay.
Horumarinta maalgashiyada gaarka loo leeyahay ee garoomada diyaaradaha ee hadda jira iyo kuwa cusub iyada oo loo marayo waddada PPP.
Bixi Habka Hagista Hawada oo hufan.
Iyada oo loo marayo Diyaargarowga Xumbo -hawleedka, ayaa lagu dadaalay sidii loo hubin lahaa in si caddaalad iyo sinnaan leh loola dhaqmo kuwa sidayaasha u ah qaybta caalamiga ah.
Heerka Canshuurta Badeecadaha iyo Adeegyada (GST) ayaa hoos loogu dhigay 5% laga bilaabo 18% adeegyada Dayactirka, Dayactirka iyo Dib -u -hagaajinta (MRO).
Jawi ku habboon kiraynta iyo maalgelinta bay'ada ayaa la awooday.
Caqli -galinta marin -habaabinta hawada Hindiya iyadoo lala kaashanayo Ciidanka Cirka ee Hindiya si loo maareeyo hawadda hawada, waddooyinka gaagaaban iyo isticmaalka shidaalka oo hooseeya.
Isuduwidda daneeyayaasha si loo xaliyo arrimaha.
Dawladdu waxay kaloo qaadday tallaabooyin dhowr ah oo dib -u -habayn loogu samaynayo waaxda duulista rayidka ee dalka iyadoo bixisay kaabayaal heer sare ah iyo tas -hiilaad. Dhiirigelinta maalgashiyada gaarka loo leeyahay ee garoomada diyaaradaha ee hadda jira iyo kuwa cusub iyada oo loo marayo waddada PPP.
Oktoobar 21, 2021 at 01: 34